Bisnu Dhital – Phalaicha Khabar
Tag: Bisnu Dhital
Posted on २०७८ असार २८, सोमबार १२:१२ by phalaicha khabar
क्षितिजमा मधुरो आवाजमा एउटा गित बज्छ “माछी मार्न जाऊँ न दाजै काला पानीमा” हाम्रा घरका २ जना नानीहरू छोरी बिनिषा र छोरो शिशिर त्यो क्षितिजमा बजेको गीत सुनेर भित्रबाट हतार हतार आँगनमा निस्कन्छन । त्यतिबेलासम्म क्षितिजमा बजेको आवाज नजिकै आइपुग्छ, मलाई छोरा छोरीले बोलाउँदै भन्छन “बाबा माछा आयो, माछा खाने नि !” म बाहिर निस्कन्छु र छोराछोरीको ईच्छा बमोजिम माछा किन्छु, । छोराछोरी त खुसी हुन्छन तर मेरो मनमा एउटा प्रश्न खुब खड्किन्छ ।
यो गीत यसरी जथाभावी किन प्रयोग भैरहेको होला ? यस्को भाव बुझ्न आम नागरिकले किन नसकेका होलान ? सम्वन्धित या हामीले आम नागरिकलाई यो गीत कसरी जन्मियो ? के को लागि जन्मियो ? यस गितले भन्न खोजेको बुझाउन खोजेको संदेश के हो ? बुझाउन किन नसकेका हौंला ? हाम्रा कलिला मस्तिष्कका छोराछोरीलाई यो मात्र थाह छ कि यो गित बजेपछि माछा आउँछ, माछा किन्न पाईन्छ । हाम्रा नानीहरुको बाल मस्तिष्क भ्रम छर्ने अधिकार यी ब्यापारीहरुलाई कस्ले दियो ? यो विज्ञापन बनाउने व्यक्तिले कसलाई रोयल्टी तिरेर वा कोसँग अुनमति मागेरे बनाए ? रेडियोमा यी र यस्ता विज्ञापन खुलेआम बज्ने गर्छन्, यिनीहरुलाई यस्ता गीतहरूको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कस्ले दियो ? मेरो मस्तिष्क यी र यस्ता प्रश्नले भरिएर आउँछ तर उत्तर कस्ले दिने ?
“माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा” यो गीतका श्रष्टाले यो गीत ‘हाम्रो सिमानामा रहेको कालापनी हाम्रो हो, महाकाली हाम्रो हो’ भन्ने सन्देश दिएका थिए । यही कारण भारतले यो गीत भारतमा प्रतिबन्द समेत गर्याे । यस्तो गहिरो अर्थ बोकेको गम्भीर सन्देश दिएको गीत यसरी प्रयोग हुँदा ती श्रष्टाले के सोचिरहेका होलान ? यी श्रष्टाको मन कति दुखेको होला ? हामीले कहिल्यै सोचेका पनि छैनौँ । हामी त अरुको वौद्धिक सम्पतिको यति दुरुपयोग भएको टुलु–टुलु हेरेर बसिरहेका छौँ । तर यो मौनता हाम्रा लागि नै घातक छ । हाम्रा छोराछोरीको मस्तिष्कमा गलत र भ्रामक कुराहरू भरिदिने यस्ता विज्ञापनलाई निरुत्साहित कस्ले गर्ने र कसरि गर्ने ? बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नत्र ‘माछी मार्न जाउँँ न दाजै काला पानीमा’, ‘माछी मार न हो दाइ हो आजलाई चटनी’ भन्दा माछा आयो भन्ने बुझिन्छ र ‘रेलको झ्याल समाएर सँगै भागौँला’ भन्दा कवाडी फलाम लिन आयो भन्ने मात्र बुझिन्छ ।
त्यसैले सम्बन्धित सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ । कसैको वौद्धिक सम्पतीबाट कुनै पनि ब्यापारिक लाभ लिनु गैह्र कानुनी छ । बेलैमा सचेत रहौँ सचेत बनाउँ ।
नोट: यी माथिका गित प्रतिनिधी मात्र हन्, यहाँ सयौँ गीतको दुरुपयोग देश भरका सयौँ रेडियो, एफ.एम स्टुडियोले गरिरहेका छन् ।
Posted in कला/साहित्य, रगंमञ्च, लेखTagged Bisnu Dhital, माछी मार्न जाउँँ न दाजै काला पानीमा, विष्णु धितालLeaveaComment on ‘माछी मार्न जाऊँ न दाजै’ गीत माछा ब्यापारीको विज्ञापन हो ?